Samachar Batika || News from Nepal » अध्ययनअनुसार शनिबारको रा’त महिलाहरु सबैभन्दा बढी से’क्सी हुनुको र’हस्य… पुरा पढ्नुहोस !
अध्ययनअनुसार शनिबारको रा’त महिलाहरु सबैभन्दा बढी से’क्सी हुनुको र’हस्य… पुरा पढ्नुहोस !
एजेन्सी । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रा’त महिलाहरु सबैभन्दा बढी से’क्सी हुनेगरेको र’हस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर ड’गको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो का’बुमा राख्न सक्दैनन् ।
त्यो दिन भनेको शनिवारको रा’त हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफूलाई ‘सि’डक्टिव फि’ल’ गराउन विभिन्न तरीका अपनाउँछन् ।
उनीहरू शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पु’शअप ब्रा लगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र से’क्सी स्मा’इल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूमको हल्का स्प्रे स्पेसल फि’ल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले आफ्नो पा’र्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
उक्त समयमा महिलाहरुले से’क्सी लु’क पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टा’इट फि’टिङ कपडा लगाउने, श’र्ट स्क’ट र ग’हना लगाउने गरेकाे पनि सर्भेका क्रममा भेटिएकाे छ ।
त्यसैगरी ११ प्रतिशत मानिसहरुमा बा’इपोलार डि’सअर्डर हुने र ६ प्रतिशत डि’प्रेशन र ए’क्लोपनाको शि’कार हुने पनि पत्ता लगाइएको हो ।
यस्ता मानिसहरुमा अ’निद्राको समस्या बढी भेटिने हुनाले नै उनीहरु राति सक्रिय हुने गर्छन् । त्यसकारण यिनीहरु मध्य रातमा मोबाइल चलाउने, चिया पकाउने जस्ता ग’तिविधिमा सं’लग्न हुने गरेको प्रमुख अध्ययनकर्ता ड्यानिअल स्मिथले बताएका हुन् ।
उनका अनुसार यस प्रकारका मा’नसिक रोगबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसीमा तो’क्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रो’क लगाए समस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्र’योगले ग’म्भीर स’मस्या नि’म्त्याउने गरेको पाइन्छ ।
प्रकाशित मिति ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १६:२८